Igqwetha lezindlu zeJersey City-NJ kunye neNW kunye neNdawo yeNdawo ethengisa izindlu, iQela, uKhuselo lweNtshabalalo kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Blog / Akohlulwanga / Igqwetha lezindlu zeJersey City
Iqela lethu lizinikele ekwenzeni konke ukuthengiselana ngepropathi yakho njengoko kungenamthungo kwaye kungabikho kuxinzelelo kunokwenzeka, Ukuthenga ikhaya yeyona nto ibiza kakhulu umntu ayenza kubomi bakhe. Ukuba ne-NJ Igqwetha lezindlu inokwenza inkqubo ingabi noxinzelelo. Sinokuqinisekisa ukuba awulibali nantoni na kwaye ukuba awuthathelwa nto nabani na ojongana naye.
Ukuba ucinga ngokutyala imali, sinokukunceda ukuba wenze iJersey Trust okanye iNew Jersey LLC ukukhusela ii-asethi zakho. Silapha ukumela.
Sinceda abathengi bethu:
Ukuthengisa kufutshane eND
Ukuthengisa ekhaya kwiJamani City
Ukuthengwa kwekhaya kwisiXeko saseJersey
I-LLC kunye nolwakhiwo lwethemba
ENew Jersey naseNew York akunyanzelekanga ukuba ube negqwetha xa uthenga okanye uthengisa izindlu nomhlaba, kodwa zihlala zilicebo elilungileyo. Jonga eli nqaku leNew York Times ngezizathu. Inqaku leNew York Times: Ityala lokuqesha igqwetha
Nxibelelana nathi kwi (844) 5 - DEFENSE - (844) 533-3367 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe]
I-New Jersey Landlord Tenant Order yokubonisa oonobangela
Unyaka omnye woku-Asylum Wokugqibela-Amagqwetha eNtsholongwane aBafudukayo
UkuGxothwa kokuSuswa-kwiGqwetha lamaLungelo okufudukela eNew York
Iidilesi zeNdlu yeNkundla yaseNew Jersey Essex
Ukuthengisa okucwangcisiweyo kweSheriff e-Hudson County New Jersey kwinyanga ka-Epreli 2017